Ny mpampita hafatra dia ny hafatra - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Ny medium dia ny hafatra
Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny mahaliana hilazana ny fotoana iainantsika. Mety efa naheno ny teny hoe "premodern", "modern" na "postmodern" ianao. Ny sasany aza miantso ny fotoana ipetrahantsika amin'ny tontolo iray taorian'ny tontolon'ny varotra. Ny mpahay siansa sosialy koa dia manolotra teknika samihafa ho an'ny fifandraisana mahomby ho an'ny taranaka tsirairay avy, izany hoe "mpanorina", "boomers", "busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" na "moosa".
Saingy tsy maninona izay tontolo iainantsika, ny fifampiresahana tena misy ihany no ahatafita raha samy hahatratra ny ambaratonga iray mihoatra ny fandrenesana sy ny fitenenana ny andaniny sy ny ankilany. Ny manam-pahaizana momba ny serasera dia milaza amintsika fa tsy ny fiafarany ny resaka sy ny fihainoana fa fomba iray. Ny tena fahazavan-tsaina dia tanjon'ny fifandraisana. Ny antony fotsiny dia mahatsiaro ho tsara kokoa ny olona iray satria "narotsany ny sainy" na etsy ankilany dia mieritreritra fa efa nahatanteraka ny adidiny izy ireo satria efa nihaino ny iray hafa izy ireo ary avelao izy ireo hiteny fa tsy voatery hoe efa nahalala ny tena izy. Ary rehefa tsy nifankahazo tsara ianareo, dia tsy tena nifampiresaka - dia niteny sy nihaino fotsiny ianao fa tsy nahazo. Hafa amin'Andriamanitra izany. Tsy mizara ny heviny amintsika fotsiny Andriamanitra ary mihaino antsika dia mifandray amintsika miaraka amin'ny fahatakarana izany.
Ny toerana iray ahitantsika izany dia ao amin’ny Hebreo 1,1-3: «Rehefa niteny imbetsaka sy tamin’ny fomba maro tamin’ny razana Andriamanitra tamin’ny alalan’ny mpaminany, dia tamin’izao andro farany izao no nitenenany tamintsika tamin’ny alalan’ny Zanaka, Izay notendreny handova ny zavatra rehetra, ary Izy no nanaovany izao tontolo izao koa. Izy no taratry ny voninahiny sy ny endrik’ ny tenany ary mitondra ny zavatra rehetra amin’ ny teniny mahery”. Andriamanitra dia mampita ny fitiavany antsika amin’ny maha-iray amintsika, mizara ny maha-olombelona antsika, ny fanaintainantsika, ny fitsapana, ny fanahiantsika, ary mitondra ny fahotantsika eo Aminy, mamela azy rehetra ary misy toerana ho antsika miaraka amin’i Jesosy eo anilan’ny Ray.
Na ny anaran'i Jesosy aza dia mampita ny fitiavan'Andriamanitra antsika: ny anarana hoe "Jesosy" dia midika hoe "Famonjen'ny Tompo". Ary misy anarana iray hafa ho an'i Jesosy dia "Imanoela", izay midika hoe "Andriamanitra miaraka amintsika". Tsy Zanak ’Andriamanitra irery i Jesosy, fa Tenin’ Andriamanitra koa izay manambara amintsika ny Ray sy ny Sitrapon’ny Ray.
“Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny Zanaka Lahitokan’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” (Jao. 1,14)». Tahaka antsika Jesosy ao amin’i Jaona 6,40 fa ny sitrapon'ny Ray dia ny "mba hanana fiainana mandrakizay izay mahita ny Zanaka ka mino Azy" Andriamanitra mihitsy no nanao ny dingana ho antsika mba hahalalantsika azy, ary manasa antsika hihaona aminy manokana amin'ny alalan'ny famakiana ny soratra masina, amin’ny alalan’ny vavaka, ary amin’ny alalan’ny fiarahana amin’ny olona hafa izay mahafantatra Azy. Efa fantany ianao. Tsy izao ve no fotoana nihaonanao taminy?